တစ်ခါစားကြည့်ယုံနဲ့ လျှာလည်သွားမယ့် ငါးသံပုရာပေါင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » တစ်ခါစားကြည့်ယုံနဲ့ လျှာလည်သွားမယ့် ငါးသံပုရာပေါင်း
တစ်ခါစားကြည့်ယုံနဲ့ လျှာလည်သွားမယ့် ငါးသံပုရာပေါင်း
Posted by နွယ်ပင် on Jun 13, 2011 in Food, Drink & Recipes | 14 comments
မနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့လဲဖြစ် အလုပ်ပိတ်ရက်လဲဖြစ်တော့ တစ်ခုခုလုပ်စားမယ်ဆိုပြီး ငါးသံပုရာပေါင်း လုပ်စားဖို့ စဉ်းစားမိတယ် ။ ဆိုင်မှာ 0ယ်စားရင် တစ်ကောင်ကို (2500/ 3000) လောက်ပေးရတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်စာရင် အဲ့လောက်ငွေနဲ့ဆိုရင် အနည်းဆုံ (2) ကောင်လောက်တော့ အသာလေး စားလို့ရတယ်ဆိုပြီး ငါးပေါင်းဖို့အတွက် တီလားပီးယား (ဇလားပီးယား)ငါး 0ယ်လာခဲ့တယ် ။
အရင်ဆုံး တီလားပီးယားငါးကို ဗိုက်ခွဲ၊ အညစ်အကြေးတွေထုတ်၊ ရေဆေးပြီး အကောင်လိုက်ကို ဆား၊ အချိုမှုန့်နဲ့ နယ်ပြီးနှပ်ထားပါတယ်။ ဂျင်းကို ပါးပါးလှီးပြီး၊ ကြက်သွန်ဖြူကို ဒါးပြားရိုက်ထားပါတယ်။ ပြီးရင် မီးဖိုပေါ်အိုးတင်ပြီး ရေအနည်းငယ် ထည့်ပါတယ် ပြီးရင်နှပ်ထားသောငါး ပါးပါးလှီးထားသောဂျင်း ဒါးပြားရိုက်ထား ကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုအတူရောကာ အပူခံနိုင်မယ့် ပုဂံလုံးခံပြီး အိုးထဲထည့်ကာပေါင်းပါတယ် ။ငါးကိုပေါင်းထားစဉ်မှာ ငရုတ်သီးစိမ်း စားနိုင်သလောက်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ခပ်များများကို ရောပြီး ထောင်းပါတယ်။ ပန်းကန်တစ်လုံးမှာ ရေနွေး အနည်းငယ် ထည့်ပါတယ်။ ရေနွေးထဲကို ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ထောင်းထားတာရယ် သံပုရာရည်ရယ် ညှစ် နောက် ဆား၊ အချိုမှုန့် ထည့် နံနံပင်နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ် လှီးထည့်၊ အားလုံးသမအောင် မွှေပြီး ဖျော်ထားပါတယ်။ ငါးပေါင်းတာ 15 မိနစ် မိနစ် 20 လောက်ဆိုရင် ကျက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် (ငါကပေါင်းထားတဲ့အတွက် ငါးပေါ်ကို ရေနွေးငွေ့လေးတွေ ကျနေတက်ပါတယ်။) အဲ့ဒီရေလေးတွေပါပါ0င်တဲ့ ငါးကို ပန်းကန်ပြားထဲကိုပြောင်းထည့် ပါတယ်။ ပြီးရင် အပေါ်ကနေ ခုနကဖျော်ထားတဲ့ ချဉ်စပ်ရည်လေး လောင်းထည့်ပါတယ်။ ဒါဆို ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်၊ သံပုရာနံ့ မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ငါးသံပုရာပေါင်လေးရပါပြီ …
ပေါင်းတာ ဘယ်အိုးသုံးရလဲ။ အပူခံ ပန်းကန်လုံးနဲ့ ငါးကို ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။ ငါးတကောင် အတွက် ကြက်သွန်ဖြူ ဘယ်နှစ်ကျပ်သား၊ ငရုတ်သီး မည်မျှပမာဏ၊ အချိုမှုန့်၊ ဆားမည်မျှပမာဏ၊ ရေဘယ်လောက်များများ၊ သံပုရာသီး ဘယ်အရွယ်ရှိတဲ့ ဘယ်နှစ်လုံး၊ ကြက်သွန်မိတ်၊ နံနံပင် ဘယ်လောက်လဲ။ ငါးကို ဆား၊ အချိုမှုန့်နဲ့ နယ်ပြီးနှပ်ထားတာမှာ ဆနွင်းမှုန့်သုံးရမှာလား ဘယ်လောက်သုံးရမှာလဲ။ ငါးက ဘယ်လောက်သားလောက်ရှိတဲ့ ငါးလဲ။
ကျွန်တော့်ချစ်သူ စိတ်ကောက်နေလို့ ပေါင်းကျွေးမလို့ ချော့ရမယ်လေ။
နီလဲ နီ့ ကိုကို ဂိုကျွေးသလို နာလည်း နာ့ဂျစ်သူကို ကောင်းကောင်းလေး ကျွှေးဂျင်ဒါပေါ့။
ပေါင်းတာက ရိုးရိုး ဒန်အိုးပေါ့ (ငါးရော ငါးထည့်မယ့် ပုဂံရောဆံ့မယ့် အရွယ်လောက်ပေါ့)
ကြက်သွန်ဖြူက ဘယ်နှစ်ကျပ်သားရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး ငါးအပေါ်ကြည့်ပြီတော့ပေါ့ ကြက်သွန်ဖြူ များများကြိုက်ရင် များများပေါ့ ငရုတ်သီးကလဲ အစပ်စားနိုင်သလောက်ပေါ့ အစပ်ကြိုက်ရင် အတောင့် များများပိုထည်ပေါ့ ငါးကို ဆနွင်းမျုန့် ပါတယ်ဆိုရုံလေး နယ်ပေါ့ အများကြီးဆို ဆနွင်းစော်နံတယ် သံပုရာသီးက အရွယ်တော် (2) လုံးလောက်ပေါ့ ကြက်သွန်မိတ်က ခပ်သေးသေးတစ်စီး နံ့နံပင်က ငါးဆယ်ဖိုးလောက် ငါးထည့်ပေါင်းတဲ့ရေက ငါးထည့်မယ် ခွက်ရဲ့ တစ်0က်လောက်မရှိသရှိလေးထည့် ငါးက အစိတ်သား သုံးဆယ်သားလောက်ရှိတယ် ငါးပေါ့
ချစ်သူက စိတ်ကောက်နေရင်တော့ ပေါင်းကျွေးလိုက်ပါ လက်ရာကောင်းမကောင်းကတော့ ကိုယ့်အပေါ်မူတည်နေတော့ စိတ်ကောက်ပြေမပြေတော့ မသိပါ …..
ဒန်အိုးက ဆန် ၂လုံးချက်အိုးလား သုံးလုံးချက်အိုးလား။ ပန်ကန်လုံးထဲကို ငါးထည့်ရမှာပေါ့။ နွယ်ပင် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီး ဘယ်လောက်ထည့်လိုက်လဲ။ ဆား အချိုမှုန့် က လက်ဖက်စားဇွန်း တဇွန်းစာရလား။ ဂျင်းက ဘယ်လောက်လည်း။ ဆောင်းတွင်း၊ မိုးအေးအေးဆို ငရုတ်ကောင်းထည့်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ တရုတ်မဆာလာ ထည့်ရင်ရော။
eros ရေ ဒန်အိုးက ဆန်၂လုံးချက်အိုးလား သုံးလုံးချက်အိုးလားဆိုတော့ ငါးက သိပ်ကြိးရင် ဆန် တစ်ပြည်ချက်အိုးလောက်မှရမယ်ထင်တယ် ….:) …. နွယ်ပင်ကတော့ ကြက်သွန်ဖြူကို (2/3) လုံးလောက် (အမွှာအများကြီးပါတဲ့ကြက်သွန်ဖြူ) ငရုတ်သီးကတော့ (15) တောင့် ဂျင်းက လက်တစ်ဆစ်လောက် ထည့်ပါတယ် … ငရုတ်ကောင်းထည့်ရင် ကောင်းပါတယ် တရုတ်မဆာထည့်ရင်တော့ အနံ့ တစ်မျိုးပြောင်းသွားလို့ နွယ်ပင်ကတော့ မကြိုက်ပါဘူး …
(တရုတ်မဆာထည့်ရင်တော့ အနံ့ တစ်မျိုးပြောင်းသွားလို့ နွယ်ပင်ကတော့ မကြိုက်ပါဘူး …) တရုတ်ကြီး ဆာ၊မဆာတော့မသိဘူး မြန်မာပြည်က အကောင်ပလောင်ပေါင်းစုံ ဒင်းလက်ချက်နဲ့ မျိုးတုံးတော့မယ်။
မယုံဘူး .. မယုံဘူး…
တွေ့ဆုံပွဲလုပ် ရင် နွယ်ပင် က
ရွာသူ / ရွာသားတွေ အားလုံးကို ငါးသံပရာပေါင်း ပေါင်းကျွေးမှာလား
အဲလို လက်တွေ့မှ ယုံမှာ
ရှလွတ် .. အရသာရှိမဲ့ပုံလေးပဲ ၀င်ရောက်စားသုံးသွားပါကြောင်း …. :D
မမနွယ်ပင်က အိမ်မှုကိစ္စကျွမ်းကျင်တယ် ထင်တယ်နော်။
မမရဲ့ သံပရာငါးပေါင်းလေး စားချင်လိုက်တာ တစ်ခါမှမစားဘူးသေးဘူး ရှလွတ် လာစားသွားတယ်နော်
သူ့ဘာသာ ခုန်စွခုန်စွ အသေဆိုးနဲ့သေသွား
နည်းနည်းတူးလာတာနဲ့ မီးဖိုထဲက ကောက်ထုပ်ပြီး စားတာ ကောင်းမှကောင်းဘဲ
ခုဆိုရင်တော့ ဘာအသားမှ ညာအသားမှမဟုတ်ဘူး
အဲရိုးစ်သိချင်တဲ့ ငါးပေါင်းနည်း အသေးစိတ်ကို ကိုကြောင်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ်….
အပူခံ ပန်းကန်လုံးနဲ့ ငါးကို ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ?
လက်နဲ့ ဒါမှမဟုတ် ညှပ်နဲ့ ကိုင်ထည့်ပေါ့…
ငါးတကောင် အတွက် ကြက်သွန်ဖြူ ဘယ်နှစ်ကျပ်သား၊ ငရုတ်သီး မည်မျှပမာဏ၊ အချိုမှုန့်၊ ဆားမည်မျှပမာဏ၊ ရေဘယ်လောက်များများ၊ သံပုရာသီး ဘယ်အရွယ်ရှိတဲ့ ဘယ်နှစ်လုံး၊ ကြက်သွန်မိတ်၊ နံနံပင် ဘယ်လောက်လဲ ?
အနေတော်ကလေးပေါ့ကွယ်။ ထပ်ရှင်းရရင် မနည်းမများထည့်ပါ။
ငါးကို ဆား၊ အချိုမှုန့်နဲ့ နယ်ပြီးနှပ်ထားတာမှာ ဆနွင်းမှုန့်သုံးရမှာလား ဘယ်လောက်သုံးရမှာလဲ?
နီချင်ရင် အရောင်တင်မှုန့်၊ ဝါချင်ရင် နနွင်းမှုန့်၊ ဖြူချင်ရင် ထုံးမှုန့်ထည့်နိုင်ပါတယ်…..
ငါးက ဘယ်လောက်သားလောက်ရှိတဲ့ ငါးလဲ?
ခပ်လတ်လတ် ငါးတကောင်ပါ။ ခပ်ရွယ်ရွယ်လို့လည်း ပြောရင်ရတယ်….
ကျွန်တော့်ချစ်သူ စိတ်ကောက်နေလို့ ပေါင်းကျွေးမလို့ ချော့ရမယ်လေ?
ချစ်သူစိတ်ကောက်ရင် ကျွေးရမှာ အဲဒါဟုတ်ဖူးလေ၊ ပြောနေရရင် ဟုတ်တော့ဘူး
2 ခါပြန်ပေါင်းလိုက်ပါ … ပြီးရင် ဖက်နဲ့ထုတ်ထား ….
ပြန်ပေါင်းထုတ်ပေါ့ …. ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင် ဆိုတာအဲလိုလုပ်ရတယ်လေ
လုပ်နည်းလေး သိသွားပြီ … အားလျှင် လုပ်စားလို့ရတာပေါ့ … ။ ကျေးဇူးပဲ နွယ်ပင်ရေ… ။
ငါးပေါင်းစားချင်လွန်းလို့ western park မှာ သွားစားပါတယ်… စားလို့တော့ အရမ်းကောင်းတယ် … ပိုက်ဆံရှင်းတော့ ခြင်္သေ့လေးတွေ နှစ်ဒါဇင်နီးပါးထွက်သွားတယ် ။